Liiska Hubinta Suuqgeynta: 21 Istaraatijiyadood ee Kobaca | Martech Zone
Liiska Hubinta Suuqgeynta: 21 Istaraatijiyadood ee Kobaca
Isniin, Janaayo 15, 2018 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Sidaad u maleyn karto, waxaan helnaa codsiyo badan oo aan ku daabacno faahfaahinta sawirada Martech Zone. Waa sababta aan u wadaagno faahfaahinta sawir toddobaadle ah. Waxaan sidoo kale iska indhatirnaa codsiyada markaan helno faahfaahinta si fudud u muujineysa in shirkaddu aysan sameynin maalgashi weyn si ay u dhisto qaab muuqaal ah oo qiimo leh. Markii aan riixay boggaan infographic ka ah Brian Downard, Aasaasihii Istaraatiijiyadaha Ganacsi ee ELIV8, Waan aqoonsaday iyaga tan iyo intaan wadaagnay shaqooyin kale oo ay qabteen.
Sawir gacmeedkan; hase yeeshe, wax dhammaystir ahi kama yaraa! Brian iyo kooxdiisa ayaa daabacay a infographic cusub oo lagu gaarayo kobaca ganacsiga la suuq geynta taas oo qiimo leh, qurux badan, oo bixisa tirakoobyada aasaasiga ah ee lagu taageerayo istiraatiijiyad kasta. Brian iyo kooxdiisu waxay bixiyaan la-talin isku dhafan iyo adeegyo suuq-geyn ah oo loogu talagalay macaamiil ganacsi oo aad u tiro badan.
Waa maxay Suuq geynta?
Suuqgeynta gudaha waa istiraatiijiyad ka faa'iideysata waxyaabaha soo jiidanaysa rajada laga qabo kaqeybgalka iyo beddelaadda shirkadaha internetka. Shirkaduhu waxay adeegsadaan baloogyada, Podcasts, video, eBooks, joornaalada, joornaalada, raadinta dabiiciga ah, badeecooyinka jirka, suuqgeynta warbaahinta bulshada, iyo dallacsiinta lacag bixinta ah si ay u gaaraan bartilmaameedka la xiriira.
Brian wuxuu soo ururiyey macluumaadkan oo bixinaya an liiska hubinta suuq geynta oo ka mid ah 21 istaraatiijiyad muhiim ah oo la geeyo taas oo kobcin doonta ganacsigaaga adoo adeegsanaya xeelado suuq geyn ah.
Soodejiso Liiska Hubinta ee Kordhinta 94
Sida Loo Dardar Galiyo Kobcinta Ganacsiga Suuq Geynta
Abuur Qiimo leh Blogging - Ganacsiyada bartaas laga helo 77% taraafiko badan iyo 97% xiriiriyeyaal badan kuwa aan samayn.
U Adeegso Baraha Bulshada Si Aad Usocoto Gaadiidka - 2.03 bilyan isticmaalayaasha warbaahinta bulshada sii ganacsiyada channel cusub oo cajiib ah wado taraafikada iyo hel macaamiil cusub.
Adeegso SEO si aad uga hesho khadka tooska ah - 93% khibradaha khadka tooska ah ku bilow mashiinka # raadinta. Markaad si habboon u hagaajiso goobtaada iyo waxyaabaha ku jira matoorada raadinta, waad darajooyinkaaga kordhi iyo hesho taraafiko badan.
Ka Faa'iidee Dhageystayaasha Kale ee Dadka - Ganacsiyadu waxay arkaan a Celinta 6-ilaa-1 markay ka heli karaan kana hawl geli karaan dhagaystayaasha khuseeya bogagga kale.
Abuur Dib-u-habeyn iyo Xayeysiisyada Internetka ee PPC - Soo-booqdayaasha dib loo habeeyay ayaa ah 70% ayuu u badan yahay si loogu badalo shabakadaada.
Gaadiidka Tooska ah ee Wicitaanada-Wax-qabadka - 70% ganacsiyada kuma laha wicitaanno waxqabad caan ah boggooda hore.
Ku Abuur Qiime Waxyaabaha Bixiya - Premium #content wuxuu abuuraa 3 jeer ka badan inta hoggaanka sida suuq geynta dhaqanka iyo kharashka 62% ka yar.
Ku beddel booqdeyaasha leh bogag soo degitaan ah - 56% dhammaan qasabadaha websaydhka waxaa lagu hagaajiyaa bog gudaha ah, ma aha bogga guriga.
Adeegso Foomamka Ka Bixitaanka Si Aad U Kordhiso Beddelka - Ganacsiyada leh 'opt-in #form' ayaa awood u leh kordhi 1000% ama ka badan!
Adeegso cadeynta bulshada si aad u abuurto kalsoonida - Faallooyinka macaamiisha way awoodaan kordhinta waxtarka suuq-geynta 54% maxaa yeelay, 88% dadku waxay aaminaan # faallooyinka macaamiisha kale inta ay ku kalsoon yihiin talooyinka ka imanaya shaqsiyaadka lala xiriirayo.
U Adeegso Maareynta Xiriirka Macaamiisha Raadinta Leads - CRM waa awood kordhinta dakhliga 41% qofkii iibiya markii loo isticmaali jiray raadinta iyo kobcinta hoggaanka.
U dir E-mayl si aad uxirto iibsiyo badan - $ 1 kasta oo lagu kharash gareeyo suuqgeynta iimaylka waxay leeyihiin celcelis celis ah $ 44.25!
Samee Qalabaynta Suuqgeynta - Qalabaynta hagaajinta barbaarinta habka wuxuu abuuraa a 10% ama ka badan koror dakhliga gudaha 6-9 bilood oo keliya.
Abuur Waxyaabaha Diirada La Saaray - 61% dadka waxay u badan tahay inay wax ka iibsadaan shirkad siisa # content.
Isticmaal Falanqaynta si aad u Raadiso Channels Top - +50% ganacsiyada ay ku adag tahay u yeelaan waxqabadka suuqgeynta si toos ah natiijada dakhliga.
Hayso Taageero Macaamiil oo Cajiib ah - 65% macaamiisha ayaa ka tagaya a adeegga macaamiisha keli ah khibrad
Abuur Faallooyin ku saabsan Warbaahinta Bulshada - 53% dadka kuwaas oo la socda magacyada baraha bulshada ayaa aad ugu daacadsan magacyadaas.
Abaal mari Macaamiisha Daacadda ah - Waa kharash 5 jeer badan si loo helo macaamiil cusub intii ay samayn lahayd inay sii hayso kuwa jira. Taasina waa sababta ay muhiim kuugu tahay adiga abaal mari macaamiishaada daacada ah si looga ilaaliyo inay soo noqdaan waxbadan.
U Isticmaal Shakhsiyeyn Si Aad U Waddo Ka Qaybqaadashada - Ganacsiyada waxay arkeen koror ah 20% iibka khibrad shaqsiyadeed iyo talo soo jeedin sii macaamiisha waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyo alaabada ay rabaan.
Adeegso Qalabka Sahanka & Jawaab celinta - Waxay qaadataa 12 khibrad macmiil oo togan in la kabo 1 diidmo waayo-aragnimo. Uruurinta jawaab celinta ayaa kaa caawin doonta baabi'i fursada khibrad xun oo macaamiil ah.
Ururi Faallooyinka & Markhaatiyada - Daraasadaha ayaa muujinaya taas70% macaamiisha fiiri sheyga # faallooyinka kahor intaadan iibsan. Weydiinta macaamiisha dib u eegista waqtiga saxda ah, ayaa abuuri doonta u doodayaasha calaamadaha in wuxuu soo jiitaa dad cusub.
Tags: AnalyticsdhagaystayaashahubkaaBrian Downardwac talaabowicitaan ficilchannelsliiska hubiliiska hubintaisbeddelkablogging shirkadahakalsoonidaCRMctadaacadnimada macaamiishamaamulka xiriirka macaamiishataageero macaamiishaELIV8Email Marketingqalabka jawaab celintamarketing inboundliiska hubinta suuq geyntabeddelashada bogga degitaankaboggaga soo degayamacaamiisha daacadda ahsuuq-geynta suuqadalabyofoomamka xulashadashakhsi ahaaneedReviewsiibka diirada saaray waxyaabahaSEOwarbaahinta bulshadacaddayn bulshosahanmarqaatiyaal
Sida loo hubiyo, looga saaro, loogana hortago kharibaadda boggaaga WordPress
JARVEE: Barnaamijka Aaladda Is-dhexgalka Bulshada ee Windows-based Windows.
Oktoobar 28, 2015 at 1:00 PM
Kaliya waxaan rabay inaan idhaahdo mar labaad waad ku mahadsan tahay wadaagista iyo ereyada wanaagsan!
Oktoobar 28, 2015 at 2:05 PM
Dhammaan way u qalmeen, Brian!
Nov 5, 2015 at 4: 16 AM
Xusuusin doonaa liiskan hubinta. Thx badan
Nov 5, 2015 saacadu markay tahay 3:14 PM
Rajaynaynaa in ay kaa caawinaysaa!
Jan 11, 2016 at 8: 29 AM
Taasi waa liistada suuq geynta weyn ee la wadaago.